महामारी नियन्त्रणमा क्रान्तिकारी माओवादीले औल्यायो सरकारका आठवटा गम्भिर कमजोरी, दियो यस्ता महत्वपूर्ण सुझाब – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
राहत घोषणा : जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम, सत्तामा बस्नेहरुका लागि आर्थिक लाभ गराउने साधन
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)ले महामारी नियन्त्रण र लकडाउनद्वारा सिर्जित समस्या समाधानमा सरकारले जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको र एकपछि अर्को सरकारले गैरजिम्मेवारपूर्ण रवैया प्रदर्शन गरेको भन्दै सरकारको तीव्र विरोध एवम् भत्र्सना गरेको छ । महामारी नियन्त्रण तथा लकडाउनबाट सिर्जित समस्याहरुलाई आठ बुँदामा उल्लेखित गर्दै ती समस्या अविलम्ब रुपमा समाधान गर्न सरकारसित जोडदार माग गरेको छ । क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य‘किरण’द्वारा बुधबार जारी गरिएको वक्तव्यमा यस्तो माग गरिएको छ । वक्तव्यमा उल्लेखित आठ बुँदाको आधारमा सरकारलाई दबाब दिन पनि आम जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गरिएको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “सरकारले महामारीको नियन्त्रण र लकडाउनद्वारा सिर्जित समस्या समाधान गर्न भनी केही घोषणाहरु पनि गरेको छ । ती घोषणा सुन्दा नराम्रा छैनन् । तर व्यवहारमा हेर्दा ती घोषणाले जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र गरेका छैनन्, बरु तिनले सत्तामा बस्नेहरुका लागि आर्थिक लाभ गराउने साधन बन्न गएको आभाष दिएका छन् । हाम्रो पार्टी यसको तीव्र भत्र्सना गर्दछ ।”
तीन, कुनै व्यक्तिलाई उपचारका लागि अस्पतालमा लैजाँदा कोरोनाको विरामी भनेर छि छि र दुर दुर गर्ने तर उसको मृत्यु भइसकेपछि कोरोनाको सङ्क्रमण भेटिएन भन्ने सरकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिले विषयलाई अत्यन्त गंभीर बनाएको छ । कतै निको हुन सक्ने विरामीहरु पनि कोरोनाको बहानामा उपचार नपाएर मरिराखेका त छैनन् ? बुटवल र वीरगंजमा भएका मृत्युको कारण के हो ? चिकित्सकहरुबाट नै अन्तर्विरोधी कुराहरु बाहिर आइरहेको सन्दर्भमा यथार्थ के हो ? यसबारे सरकार बोल्नु पर्दछ ।
अन्त्यमा, यतिबेला देश गंभीर स्थितिबाट गुज्रिएको छ । यो स्थितिलाई ठीक ढङ्गले सम्बोधन नगर्ने हो भने नेपाली जनता महामारीको अथाह भुमरीमा फस्ने छन् र देशमा सङ्कट अरु गहिरिंदै जाने छ । यस्तो संवेदनशील घडीमा हाम्रो पार्टी सरकारलाई जिम्मेवार भएर प्रस्तुत होस् भन्ने माग गर्दछ र महामारीका विरुद्ध एकताबद्ध भएर लड्न आम जनतालाई हार्दिक अपील पनि गर्दछ ।”